महाअभियोगमा किन मौन बस्दैछ काङ्ग्रेस ? - Ratopati
- | रामलाल राजवंशी
सबै राष्ट्रिय मिडिया, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा लोकमान सिंह कार्कीको महाअभियोगको विषयले छाएको छ । लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालभरी लुकेर बसेका आवाजहरु अहिले एकपछि अर्काे गर्दैै बुलन्द भइरहेका छन् । प्रतिशोध प्रवृत्तिका पात्र, पदीय दुरुपयोगको विम्ब, त कुनै रातो घरभित्र कालो धन्दा यस्तैयस्तै लेख रचनाहरुले भरिएका छन् राष्ट्रिय दैनिकहरु । उनले गरेका र अहिले आइरहेका एकपछि अर्काे कर्तुतहरु नियाल्दा लाग्छ, उनको शैली साउथ इन्डियन मुभीको भिलेनभन्दा कम छैन । कसैलाई थर्काउने, कसैलाई दुव्र्यवहार गर्ने उनको शैलीबाट आजित भएर गएको बुधबार साँझ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको नेतृत्वमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयोे । त्यसमा केही माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको पनि हस्ताक्षर रहेको थियो । अदालतले पटकपटक तामेली टास्न खोज्दा प्रत्येक पटक अवरोध गरेका लोकमानका कर्तुतबाट शशङ्कित एमाले माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ गयो ?
कार्की नियुक्तिको समयका कृयाकलाप मेले नजिकबाट नियालेको थिएँ । तत्कालीन माओवादी नेताहरुले कार्कीको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए भने एमालेका केही नेताबाहेक अरु सबै विरुद्धमा थिए । हामी आन्दोलनकै क्रममा राष्ट्रपतिको कार्यालय घेराउ कार्यक्रम थियो । जसअन्तर्गत हाम्रो आन्दोलन शीलत निवासतिर प्रहरीको हस्तक्षेपका बाबजुद अगाडि बढिरहेको थियो । लोकमान र प्रचण्ड, बाबुरामको नाममा अश्लील गालीसमेत गर्न पछिपरेनन् । लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता खोजविन अघि नबढाउने शर्तमा लोकमान नियुक्ति हुँदै छन् भन्ने हल्ला त्यतिबेला पनि चलेको थियो । यो विषय सबै दलका शीर्ष नेतालाई थाहा थियो । आन्दोलन चलिरहेकै बेला हाम्रो नेतृत्वको मोबाइल बज्यो । त्यसमा कसको फोन आयो थाहा भएन तर फोन जसमा आए पनि खबर अनुचित थियो । दबाबको थियो । एमाले नेतृत्व चुकेको थियो । त्यतिबेला आन्दोलन स्थगित गर भनियो ।
जब माउ पार्टीका नेताबाट यसरी फोन आउन थाले । स्वभाविक थियो आन्दोलन अघि बढ्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले आन्दोलन रोक्न बाध्य भएका थियौँ । नेतृत्व चुकेको थियो । त्यति बेला हामीलाई के भनिएको थियो भने हाम्रो पार्टी तेस्रो छ, एमाले मात्रले विरोध गरेर केही सीप नलाग्ने भयो । यसले आम जनमानसमा एमालेको कद बढेको छ ।
प्रत्येक परिवर्तनको सहजकर्ता हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस फेरि लोकमान प्रकरणमा चुकेको छ । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य छलफलपछि महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हल्ला चलिरहेको बेला काङ्ग्रेसमा केही ठूला नेता नै लोकमानको बचाउमा लागेका छन् । यतिसम्म कि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले त एमालेका नेता र अख्तियार प्रमुखबीचको व्यतिगत प्रतिशोधको आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको जिकिर गरिरहेका छन् । उनको तर्क छ एमालेका केही नेतालाई अख्तियारले मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेकोले प्रतिशोध स्वरुप महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । तर काङ्ग्रेसका नेतालाई पनि अख्तियारले कारबाही गरेका धेरै नेता छन् ।
आज लोकमानमाथि महाअभियोग लागिरहँदा पेरिस डाँडाका केही नेता र सानेपालाई दुःखेको छ भने त्योभन्दा बढी लैनचौर र दिल्लीलाई दुुखेको छ । लैनचौर र दिल्लीको बफादार सम्झने नेपाली काङ्ग्रेस यसरी ढुलमुल हुनुलाई नौलो मान्न सकिँदैन । भारतीय आशीर्वादविना डेग चल्न सकिन्न भन्ने मान्यता दिमागमा बनाउँदा आम नेपाली नागरिक निरास हुन परेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई के लागेको छ भने ज्ञानेन्द्र फाल्नु र लोकमान फाल्नु एउटै हो । स्मरण रहोस् ज्ञानेन्द्र राजतन्त्र थियो लोकमान लोकमान नै हो, लोकमानतन्त्र होइन ।